Koofur Afrika: Beerihii caddaanka oo loo celinayo madowga – Kasmo Newspaper
Updated - March 3, 2018 5:13 pm GMT
London (Kasmo), Xisbiga ANC (African National Congress) ee talada Koofur Afrika haya ayaa ansixiyay isbeddello lagu samaynayo Dastuurka, una oggolaanaya Xukuumadda in ay la wareegto dhul-beereedkii muddada 5ta qarni ah ku jiray gacanta beeralayda caddaanka.
Xeerkaan cusub wuxuu qayb ka noqonayaa barnamijka siyaasadeed ee Madaxweyne Cyril Ramaphosa oo xilka kala wareegay Jacob Zuma, in wax yar ka badan 2 toddobaad ka hor.
Soojeedinta taladaan waxaa lahaa Xildhibaannada garabka bidixda asal-raaca ah EEF (Economic Freedom Fighters), kuwaas oo taageero ka helaya ANC oo aqlabiyadda Barlamaanka hasata. Sidaasna waxaa lagu ansixiyay Mooshinka dib loogu habaynayo Cutubka 25aad ee Dastuurka, oo ku gudbay 241 cod oo oggolaatay iyo 83 cod oo diidday.
Hoggaamiyaha Xisbiga bidixda, Julius Malema, ayaa hoosta ka xarriiqay in go’aanku yahay oo qur ah tillaabadii u horreysay oo lagu soo celin lahaa karaamadii shacabka dambiilayaashu halakeeyeen muddada dheer, kuwaas oo aan laga siin doonin wax magdhaw ah.
Barnaamijka siyaasadeed ee ANC oo talada qabaty 1994kii wuxuu qorayaa sidii loo yarayn lahaa sinnaan-la’aanta bulshada oo ku timid midab kala sooca, gaar ahaan markii la soo afjaray xilligii xukunkii Apartheid.
Ma jirin ilaa maanta cid kale oo ku dhiirratay arrintaan, xitaa marka loo eego xilligii xorriyadda xigay oo ANC ku naalloonaysay taageerada baaxadda leh, laakiin fadeexooyinkii Zuma oo uu ku waayay qayb ka mid ah taageeradii dadka, Xisbigu dib looma dhigi Karin tillaabo la mid ah, xilli aan la hubin waxa mustaqbalka dhici doona.
Maanta dadka madowga ah ee Koofur Afrika waxay gaarayaan 79% waxayna maamulaan 1,2% dhulalka la beeran karo, halka caddaanka ka soo jeeda Iglan iyo Holland, oo dhan 9% haystaan in ka badan 3 dalool oo 2 dhulalka la beeran karo ee miyiga iyo magaalooyinka.
Hawlgal midkaan la mid ah waxaa bilowgii sannadadii 2000 ka hirgaliyay dalka Zimbabwe, Madaxweynihii xilligaas Mugabe, kaas oo dadka madowga ah u soo celiyay dhulalkii laga xoogay xilligii gumaysiga.
Walaaca qur ah ee ka jira Koofur Afrika wuxuu yahay musuqmaasuqa baahsan ee dalkaas dartiis, in istrateejiyada la qaatay noqoto nooc ka mid ah abaalmarin lagu naas-nuujiyo taageerayaasha xukunka oo qur ah. Taas oo laga yaabo in ay keento qarax ijtimaaci ah oo ka dhaca dal ay ku noolyihiin 50 malyuun oo xaalado saboolnimo oo baahan iyo raaxo la’aan badani (discomfort) ka jirto.